I-Idyllic cottage iyarenta eStrömstad
Vässby, Västra Götalands län, Sweden
Indawo ezolileyo enabamelwane abambalwa. Imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka embindini kunye nolwandle iSeläter. I-60 sqm cottage ene-loft yokulala, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi kunye nendlu yangasese. Indlu yeendwendwe enebhedi ezimbini kunye negumbi lokuhlambela.
Ikhabhinethi inamanzi omthombo, oku kulungile ngokugqibeleleyo ukusela. Uxinzelelo oluncinci kwishawa ukuba kukho abaninzi abahlamba ixesha elide kunye nomnye emva komnye. Ikwanqunyelwe namanzi, ke ngoko cebisa kwaye ungasebenzisi iimpompo ngokungeyomfuneko njengoko inokuphelelwa ngamanzi ukuba maninzi apho ngaxeshanye.
Ishawa yangaphandle iyafumaneka.
Indlu encinci entle enendawo enkulu yangaphandle. Umgangatho olula. Apha kukho indawo eninzi yokuphumla kwi-hammock, ukudlala iithoyi, i-grill okanye ukuzonwabisa phantsi kwe-pavilion.
Ngaphakathi kwi-cottage kukho i-loft yokulala enebhedi ezi-3 zomntu oyedwa kunye neebhedi eziyi-120. Kwindlu yeendwendwe kukho indawo yabantu ababini. Ngaphakathi kwendlu enkulu kukho indlu yangasese, ngelixa igumbi lokuhlambela elineshawari likwindlu yeendwendwe. Yonke into iqeshiswa kunye kwaye ufumana isitshixo kuzo zombini iikhabhathi.
4.50 · Izimvo eziyi-40
I-cottage ikwindawo ezolileyo ehlathini, imizuzu eyi-10 ngemoto ukusuka kwiziko. Indlela emfutshane yokuya kwigalufa encinci kwinkampu yaseSeläter, okanye iilwandle eSeläter okanye eCapri.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vässby